NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - အဆိုပါမြန်အတူတကွအဆင့်ကတော့ရီယိုဧပြီလ 9th လာ
Home » အသားပေး » အဆိုပါမြန်အတူတကွအဆင့်ကတော့ရီယိုဧပြီလ 9th လာ
အဆိုပါမြန်အတူတကွအဆင့်ကတော့ရီယိုဧပြီလ 9th လာ
LumaForge NAB မှာနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်များအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်အတူတကွအဆင့်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်းအယ်ဒီတာများ, colorists နှင့် VFX အနုပညာရှင်များအချို့ထံမှတင်ပြချက်များမှတဆင့်အတူတကွ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းရောက်စေဖို့သူတို့ရဲ့ပဏာမခြေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအဆင့်ကနေ, သူတို့ 55 တင်ပြချက်များကိုထုတ်လုပ်ကြအများပြည်သူအွန်လိုင်းအခမဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဇန်နဝါရီလ3မိုက်ကယ် Horton ကဒန်တွင် Berube သူတို့မရှိတော့မှာ SuperMeet ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည် NAB ပြရန်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာတက်ရောက်လာသည့်အတိုင်း LumaForge မှာအသင်းကိုယျတိုငျ SuperMeet NAB မှာလူမျိုးရေးအတွေ့အကြုံကိုအတွက်ထွက်ခွာခဲ့ပျက်ပြယ်ခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်ခုန်များနှင့်အင်္ဂါနေ့အပေါ်ရီယို, ဧပြီ9ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်အတူတကွအဆင့်ကိုရောက်စေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ မိုက်ကယ် Horton ကနှင့် တွဲဖက်. , LumaForge တစ်ညများအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်အတူတကွအဆင့်တစ်အမှတ်တံဆိပ်ဗားရှင်းသစ်ကိုရလိမ့်မည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ရပ်ရွာများနှင့်အဘို့မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး.
"ဒန်နှင့်ငါ 18 နှစ်အကြာယခုနှစ်တစ် SuperMeet လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ LumaForge သတင်းကြားနာပြီးနောက်အင်္ဂါနေ့ညဥ့်အဖြစ်အပျက်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာကျနော်သူတို့နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့အခွင့်အလမ်းအနည်းဆုံးခုန်တက်။ NAB မှာအသက်အရွယ်အဟောင်းအင်္ဂါနေ့ညဥ့်အသစ်သန်စွမ်း, စွမ်းအင်နဲ့ပျော်စရာရောက်စေဖို့သူတို့ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆောင်တတ်၏ သက်တမ်းတိုး အဖြစ်ကောင်းစွာငါ့အပါဝင်ပတ်သက်မှုအသက်ရှင်ခြင်း။ ငါသည်သင်တို့အားလုံးကျနော်တို့ကိုတည်ဆောက်နေသောအရာကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရှိသည်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။
ဒါဟာအံ့သြစရာဖြစ်မသွားပါ။ ထိုအ yeah ပါ, တစ်ဦး Raffles ရှိလိမ့်မည် "- မိုက်ကယ် Horton က
အလည်အပတ် FasterTogether.com ဖေဖော်ဝါရီလ 12 အပေါ်ကနဦး line ကိုဖွင့်ပွဲနှင့်အခန်းအနားအသေးစိတျအဘို့။ အဆိုပါနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကိုစတင်ကြပါစို့
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှု Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit	2019-02-04
နောက်တစ်ခု: SMPTE နယူးမရှိမဖြစ်နည်းပညာ Concepts webcasts စီးရီးလွှတ်တင်